Nyuchi yehuku yakakoshwa neham uye cheese mumuto | Kicheni Mapepa
Nyuchi yehuku yakakanyiwa ham uye cheese mumuto
El kanaa Iyo nyama iri nyore kubata uye zvinotora nguva shoma kugadzira, mukuwedzera, inosangana nezvimwe zvinoshandiswa, ingava nyama kana miriwo. Naizvozvo, nhasi takagadzirira zvinonaka nzira yekubheka kuti uchada, kunanzva minwe yako tiende.
Zviri nezve Huku nuggets, yakazadzwa naSerrano ham uye chizi yakaporeswa chizi, mangar ane hutano hwakanaka. Mukuwedzera, ivo vanofambidzana neyechinyakare muto nemakarotsi.
6 huku hams.
6 zvidimbu zveSerrano ham.
Gumi nembiri matete eesiti-yakaporeswa cheese.
Munyu kana yakanyanyisa stock cube.
Chekutanga pane zvese, isu tichafanirwa kudaro Chenesa hams hachi zvakanaka. Bone iwo uye bvisa iro rakawandisa ganda uye tendon, kuvasiya akazaruka zvakakwana kuti vakwanise kuzadza iwo.
Kana tangowedzerwa uye kucheneswa, tichaisa slice yaSerrano ham uye maviri wedges echizi semi-kurapwa. Tichamonera nekuisa mushonga wemazino pairi kuti igare yakatsiga. Uye zvakare, isu tinozoisa munyu uye mhiripiri, asi zvishoma kubvira, zvese ham nechizi, zvine munyu wavo.
Kamwe wazadzwa, tichamaka mupani namafuta omuorivhi. Inofanirwa kuve yakatarwa zvakanaka kumativi ese kuitira kuti gare gare isazove mbishi. Kana vapedza, tinoibvisa mundiro.
Mupani rimwe chete, tinowedzera hanyanisi yakakoswa, mhiripiri uye madomasi, kugadzira sofrito. Saizi haina basa nekuti ichave ivhu gare gare. Kana zvese zvadzikwa, tinozoenda nazvo kugirazi rekusanganisa nekuzvipwanya.
Mukapu imwecheteyo isu takaseta iyo akachekwa karoti uye isu tinosanganisa jeti yakanaka yewaini chena, kuitira kuti zvese zvinwiwa zvezvikafu zvakapfuura zvibviswe. Tichawedzera pasi miriwo, mvura, munyu uye hamu hams.
Ticharavira munyu nekugadzirisa kana zvakakodzera, tobva tasiya bika kwemaminitsi makumi maviri ine chifukidziro kuitira kuti huku isasvibike.
Mamwe mashoko - Chicken yakakungurutswa mu serrano ham uye chizi mukirimu muto
Nguva yekugadzirira 30 maminitsi
Yese nguva 1 awa
Kilocalories pakushanda 438
Nyama Recipes, Mapepa ane hutano
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Nyama Recipes » Nyuchi yehuku yakakanyiwa ham uye cheese mumuto
Yakanyanya kunaka iyo yekubheka yehuku inotaridzika. Ndiri kuzozviita ini ndinoda huku zvakadaro…. Ndatenda
Pindura kune yane
Apple neuchi keke
Yakanaka ngirozi bvudzi dumplings, yakajairika Kisimusi inotapira